फेसबुक मातहतका सबै सामाजिक सञ्जालमा आयो यस्तो समस्या ! « Janaboli
फेसबुक मातहतका सबै सामाजिक सञ्जालमा आयो यस्तो समस्या !
काठमाडौं । गत वर्ष पनि झण्डै एक दिन जत्ति समस्या खेपेको चर्चित सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्स एपमा समस्या आएको छ । आइतबार अपरान्ह नेपालसहित विश्वभरका प्रयोगकर्ताले ३ सामाजिक सञ्जालमा समस्या व्यहोरिरहेका छन् । फेसबुक मातहतको इन्स्टाग्राम र ह्वाट्स एपमा आइतबार साँझदेखि विश्वभर ‘डाउन’ भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
नेपाली प्रयोगकर्ताले ट्वीटरमा फेसबुकलाई मेन्सन गरेर समस्याबारे जिज्ञासा राखिरहेका छन् । यी सामाजिक सञ्जालबारे वेवसाइटको मनिटर गर्ने डाउनडिटेक्टर डट सीओ डट यूकेमा सयौं गुनासो दर्जा भइसकेको बेलायती पत्रिका मिररको अनलाइन संस्करणमा उल्लेख गरिएको छ ।
हाल फेसबुकको वेवसाइट खोल्ने वित्तिकै एरर म्यासेज आउँछ । किन यी सामाजिक सञ्जालमा समस्या आयो भन्ने बारे अहिलेसम्म खुलेको छैन । फेसबुकले पनि आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । यो भन्दा पहिले पनि यस्तै समस्या आउँदा ह्याक भएको जनाइएको थियो तर फेसबुकले त्यसलाई प्राविविध त्रुटि भएको जनाएको थियो । एजेन्सी